TwinGeo - Dib-u-qeexida Fikradda Geo-Engineering -Y1E1 - Geofumadas
TwinGeo - Dib-u-qeexida Fikradda Geo-Engineering -Y1E1
Waa ku qanacsanaanta weyn ee aan ku dhawaaqeyno soo saarista daabacaaddii ugu horreysay ee majaladda TwinGeo, oo soo bandhigtay ereyga Geo-injineernimada oo ah sheeko daboolkeeda. Joornaalku wuxuu yeelan doonaa xilli-saddex-biloodle ah, iyadoo daabacaadda dijitaalka ah lagu kobciyey waxyaabo badan oo warbaahin ah, lagu soo dejinayo pdf iyo nooc daabacan oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweyn ee ay daboolayaan jilaayaasheeda
Sheekada ugu muhiimsan ee daabacaddan, ereyga "Geo-engineering" ayaa dib loo tarjumay, iyada oo ay ka mid tahay shaxanka qiimaha oo ka mid ah qabashada xogta ilaa bilawga tusaalihii hore ee ganacsiga.
Boggeeda dhexe waxaa ku yaal infographic oo ka tarjumaya isbeddelka ereyada GIS, CAD, BIM in kaalintii taariikheed ee ay lahaayeen ay ku bislaadeen oo keliya ma aha isbeddellada jaangooyooyinka ee maaraynta macluumaadka laakiin waxay matalayeen dun guud oo horseedaysa dib-u-naqshadaynta geeddi-socodka waxa loogu yeero «cilmiga dhulka», oo ka sii yaraan iyo ka-reebitaan yar. Muuqaalka muuqaalka ku jira wuxuu ku sii fidayaa isku darka BIM + PLM ee qaab dhismeedka kacaankii afaraad ee warshadaha ee hadda loogu talagalay ereyada sida Digital Twins, SmartCities oo leh aragti ah in halkii aad u muuqan lahayd meel fog ay xaqiiqdii iman doonto iyada oo aan ogaanno sidoo kale Waxay ku dhacday warshadaha Uber-Airbnb-u eg.
Mid kale oo ka mid ah qodobbada ugu waaweyn waxaa ka mid ah isbeddelada Maamulka Dhulka, kuwaas oo ay soo bandhigtay 2014 Cadastre, iyagoo ka hadlaya guulaha iyo caqabadaha aan weli ku jirin arimahan, kuwaas oo moodooyinkooda dhabta ah ee dabiiciga ahi ay ku milmaan moodooyinka isbeddelka ay sababeen bani'aadam. Waxay sidoo kale soo bandhigeysaa isbeddellada ay Cadastre 2034 ku taameyso habka ay u wajaheyso isticmaaleha ugu dambeeya iyadoo door firfircoon ka leh cusbooneysiinta iyo kaabayaasha xogta meelaha ay ku xiran yihiin xuquuqda, mas'uuliyadaha iyo xaddidaadda nidaamka dadweynaha iyadoo la adeegsanayo habka farsamooyinka diiwaangelinta. oo kaliya maahan cilaaqaadka meelaha.
Sidaa awgeed, labadan qodob oo waaweyn, shan kiis oo la adeegsado ayaa lagu daray; saddex waxay diiradda saareen qaabka xogta aasaasiga ah iyo laba ka mid ah natiijada qaadashada BIM si loo hagaajiyo geeddi-socodka warshadaha.
Plex.Earth halkaas oo Lambros uu inoo sheego qiyaasaha CAD-GIS ee isku-dhafan baahida loo qabo injineerada madaniga ah,
e-Cassini, aasaasaheeda, wuxuu na tusayaa sida boodhka macluumaadka ee ka soo baxa farriinta topoolladu u-qalanta sida hubka dhabta ah Hub.
Madaxweynaha Chasmtech wuxuu sharxayaa sida qaababka wareega dijitaalka ah ee laga soo qaato sawirada dayax-gacmeedka ay ku helayaan saxsanaansho aad u dhow kuwa tooska u helay.
Qeybtan mawduucan, majaladda waxaa ka mid ah warar ka yimid shirkadaha hormoodka ah ee warshadaha; AutoDesk, Bentley Systems, Esri, Topcon, Trimble, Hexagon iyo Microsoft.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku raaxeysato 60-kan bog ee akhriska, halka daabacaada xigta ay soo baxayso. Hadda, majaladda waxaa lagu bixiyaa qaab dijitaal ah, iyada oo loo marayo daabacaadda iyo maraakiibta dalbashada ama qaab muuqaal ah oo dhacdooyin ah oo ay ka soo qayb galayaashu ka qaybqaataan.